Indhashareerka Warshadda Jumlada ee Warshadda Shiinaha Jeebabka 3D oo leh Warshadda Sanduuqa Indhaha ee Gaarka ah iyo soo -saareyaasha | Weiti
Indhashareerka Warshadaha Jumlada Warshadaha Jilibka 3D Karbaash leh sanduuq indhashareer sumad gaar ah leh
1, DONNA style minka indhaha
2, 14mm jeedal dabacsan oo dabiici ah
3, OEM & ODM adeegga ayaa la bixiyaa
4, kayd weyn oo diyaar ah oo iib ah
√Kalocils karbaashyada mink 3D waxay ka samaysan yihiin 100% timo mink dhab ah, oo ka daadanaya tinta dabiiciga ah ee daaqayaasha, waana la fayoobaadaa. Marna ma yeeli doonno xayawaanka! Indhashaheena mink waa hypoallergenic, oo aan lahayn kiimikooyin, ha dhaawicin indhahaaga.
√Indhashareerka mink-ga ah waxaa gacanta ku sameeya xirfadlayaal. Shaqo weyn oo ku saabsan strips iyo jeedal wispy. Naqshadeynta 3D ee dhabta ah, waxay leedahay dabool dabiici ah oo duuban oo duuban, saamaynta qurxinta kala duwan. Muuqaal qalafsan oo riwaayado leh laakiin dabiici ah. Waxay kaa dhigaysaa mid aad u cad, soo jiidasho leh, dhalaalaya, oo soo jiidasho leh.
√Karbaashyadaan beenta ah waa kuwo dhaadheer oo qaro weyn, waxaad gooyn kartaa dhererka hadba baahidaada. Karbaashyada mink 3D ee Arison waa kuwo dib loo isticmaali karo, waxaa loo isticmaali karaa in ka badan 15 jeer xaaladaha caadiga ah. Way fududahay in la dalbado, ma fududa in la daadiyo. U fiican xirfadleyda ama kuwa bilowga ah.
√Indhahaan been abuurka ah waa mid fudud oo jilicsan, xitaa ma dareemi kartid culeyskiisa marka aad xirato. Raaxo u leh nolol maalmeedka, shaqada, ama ka qeybgalka xaflad. Indhahaaga ayay iftiimin doontaa. Tani sidoo kale waa doorashadaada hadiyadda ugu habboon.
Hore: OEM 3D indhashareerka Mink Lashes Handmade Makeup Full Strip Lashes
Xiga: Top Quatity Handmade Factory Strip 3D 14mm Dabaasha Jumlada Minka Jumlada ah
sanduuqa indhashareerka astaanta gaarka ah
Samee Jeebka Calaamadaha Gaarka ah ee Gaarka ah Jumlada ...
Sanduuqa Calaamadaha Gaarka ah ee Shakhsi ahaaneed ee Bulk Lon ...
Indhashareerka Siberian ee Raaxada leh 3d Mink Jeedal M ...
Jumlado Samee Calaamaddaada Gaarka ah ee Gacanta lagu Sameeyay ...
Jumlada gacmaha lagu sameeyo oo dhumuc weyn leh 3d Karbaash Mink ...
3D Mink Eyelashes Cosmetics Jumlada Been Min ...
indho -dejiye, Jeexa indhaha, Iibiyeyaasha Indhaha, Kordhinta Indhaha, dibinta, jeedal mink,